Su'aalaha la Weydiiyo - Shanghai Gokai Industry Co., Ltd.
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo leh 12 sano arimahan. Waxaan ku dhexjirnaa warshad iyo ganacsade
Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
EXW, FOB, CFR, CIF,, DDU, DDP (sida ay codsadeen macaamiisha)
T / T, L / C aragga, Paypal, Western Union
Waa maxay lacagtaadu?
Ka waran waqtiga dhalmadaada?
Qiyaastii 10-30days, waxay kuxirantahay jadwalka wax soo saarkeena iyo faahfaahinta dalabkaaga.
Ma leedahay hubiyaha kormeeraha?
Haa waxaan leenahay kormeeraha. Waxay ku noolaayeen warshada oo waxay ka hubinayeen alaabada ilaa alaabada, waan hubinaa oo aan sawiro ka qaadnaa inta lagu jiro wax soo saarka oo dhan
Miyaad bixisaa shay-baarka, bilaash ama dheeri ah?
Muunado waa bilaash, laakiin xamuulka wuxuu u baahan yahay in dhinacaaga laga bixiyo.
Sideen ku heli karaa qiimaha ugu fiican?
Fadlan bixi faahfaahinta sheyga ee baahiyahaaga si aan kuu siiyo dalabkii ugu fiicnaa markii ugu horreysay. Naqshad kasta iyo baahiyo dheeri ah ayaa gadaal nalagula soo socodsiin karaa WhatsApp, WeChat, Skype, Mail iyo kanaalo kale. Xaqiiji qiimaha.
Waa maxay MOQ?
MOQ waa 1 tan. Dhumuc kala duwan iyo moq kala duwan.
Booqashada warshadda ama kormeerka miyaa la aqbali karaa?
Haa, booqashada warshadda marwalba waa la soo dhaweynayaa lana kormeeraa sida kormeerka dhinac saddexaad okay.
Immisa ayaa lagu buuxin karaa weel buuxa?
Weelka 20ft, oo leh santuuqa, ku shub qiyaastii 16-21 tan, oo aan lahayn sariirta, ku shub qiyaastii 20-24 tan Weelka 40ft, rar ilaa 26 tan.
Waa maxay nidaamka amarku?
U soo dir dalabkaaga oo faahfaahsan → Naqshad adiga → Xaqiiji oraahda & bixinta lacag → Tijaabada caarada → Samaynta tijaabooyinka → Muunado tijaabo ah (Ansixin) Wax soo saar badan production Baaritaanka tirada
Waa maxay habka rarku?
Waxay noqon kartaa Shipping Ocean, Airlift iyo Express (EMS, UPS, DHL, TNT, iyo FEDEX). Marka ka hor intaadan dalban, fadlan nala soo xiriir si aan u xaqiijino habka shixnadaha aad doorbideyso.
Ma ka qaybgashaa bandhig kasta?
Haa, badiyaa waxaan ka qeyb galnaa bandhigyada calaamadaha magaalada Shanghai laba jeer sanadkiiba (midna waa Maarso kan kalena bisha Sebtember). Waxaanan kaqeyb galnay SGI Dubai, Fespa Europe, iwm. Mustaqbalka waxaan ku dari doonnaa liiska soo-dejinta iyo dhoofinta Shiinaha (Canton Fair) liiskayaga bandhigga, sidoo kale bandhigyo caalami ah oo lagu qaban doono dalal kala duwan.
Sidee ku saabsan adeegga iibka kadib?
Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo xagga tayada ah marka aad hesho alaabteenna, na tus sawirro iyo ka dib markaan falanqeyno waxaan awoodi doonnaa luminta ka soo xigta amarka soo socda.